Nepal National News ImageKhabar
लायन्स महाधिवेशन सम्पन्न, गभर्नरमा लायन कृष्णप्रसाद अवाल
काठमाडौं, वैशाख १ । लायन्स क्लब्स अन्तर्राष्ट्रिय ३२५ ए २ को चौथो महाधिवेशनले गभर्नरमा लायन कृष्णप्रसाद अवाल, प्रथम भाइस गभर्नरमा लायन दाशीराम खनाल निर्वाचित भएका छन् । उनीहरु ‘हुन्छ’ मतले निर्वाचित भएका हुन् ।
जीप दुर्घटनामा ८ जनाको मृत्यु, ९ जना घाइते
डोटी, वैशाख १ । डोटीको जिजोडामाण्डौं गाविसमा गएराति जीप दुर्घटना हुँदा पद्मकन्या क्याम्पस काठमाडौंका प्राध्यापक डा. जयराज पन्तसहित ८ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा ९ जना घाइते भएका छन् ।
आजबाट नयाँ वर्ष, शुभ रहोस् २०७३
काठमाडौं, वैशाख १ । नयाँ वर्ष २०७३ साल आजबाट शुरु भएको छ । सूर्य मीन राशिबाट मेष राशिमा प्रवेश गर्ने संक्रान्तिलाई मेष अर्थात् वैशाख संक्रान्ति भनिन्छ । यो नै विक्रम सम्वत्को पहिलो दिन हो ।
भूकम्पको एक वर्षः कामभन्दा कुरै बढी, जनता रुँदै धरधरी ! (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौं, चैत ३० । सुरुआतदेखि नै शुभलक्षण नदेखिएको वर्ष २०७२ आमनेपालीका लागि प्रकृतिले पनि उत्तिकै झट्का दिएर गयो । भूकम्पका दृष्टिले संसारकै अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पर्ने नेपालमा अझैपनि खतरा नटरेको विज्ञहरुले बताइरहेकै बेला वैशाख १२ को भूकम्पकै पीडितले न त प्रभावकारी राहत पाए न त पुनःस्थापनाको कार्य नै हुन सकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, चैत ३० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्तामा आउन मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका छन् । नयाँवर्ष वि.सं. २०७३ को पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार जायज र न्यायोचित माग सम्बोधनका लागि तयार रहेको भन्दै वार्ताको माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान खोज्न सकिने बताए । सहमतिका लागि आन्दोलन नभइ संवाद नै पर्याप्त हुने उनको भनाइ थियो ।
मधेसवादीलाई वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं, चैत ३० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका तराई–मधेसमा आन्दोलनरत् पक्षलाई संवादमा आउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मंगलबार देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले वार्ता र संवादमार्फत् सबै प्रकारका समस्याको हल हुने भएकाले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी सार्थक संवादमा आउन आग्रह गरे ।
बिरौटामा रातारात शालिक स्थापना गरेपछि तनाव
पोखरा, चैत ३० । पोखराको बिरौटामा गुरुङ समुदायले तमु तमुस्या नामको शालिक रातारात स्थापना गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन् । शालिक स्थापनाको विरोधमा स्थानीयबासीले मंगलबार बिरौटा बजार बन्द गरे । स्थानीयको चर्को विरोधपछि बिरौटा, मुस्ताङचोक, एअरपोर्टलगायतको क्षेत्रमा दिनभरजसो ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुन पुगेको थियो ।
भूकम्पपीडितको संख्या अझै यकिन हुन सकेन : गृहमन्त्री
काठमाडौं, चैत ३० । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले भूकम्पपीडितको यकिन तथ्यांक अझैपनि प्राप्त भइनसकेको बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री बस्नेतले भूकम्पपीडितको संख्या यकिन हुन नसकेको र कतिपय वास्तविक पीडितलेसमेत राहत नपाएको बताए ।
खोटाङ बस दुर्घटनाः २४ को मृत्यु, घाइते २५ जनालाई काठमाडौं लगियो, १७ जनाको सनाखत (नामावली)
खोटाङ, चैत ३० । खोटाङको महादेवस्थान गाविस–१ काभ्रेटारमा मंगलबार बिहान यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या २४ पुगेको छ । दुर्घटनामा अरु ३२ जना घाइते भएका छन् ।
भक्तपुरमा लिंगो ठड्याइँदै
संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म जनताको अपेक्षा पुरा हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति
काठमाडौं, चैत ३० । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नयाँ संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म जनताको अपेक्षा पुरा नहुने बताएका छन् ।